ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည် မှအရည်အသွေးမြင့် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည်စက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းကျနော်တို့သင့်လျော်သောနှုန်းထားများဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှ clients များထုတ်ကုန်ကျော်ထောက်ပံ့။ ထုံးစံအမိန့်နှင့်သာမန်အမိန့်နှစ်ဦးစလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကုန်သွယ်န်ဆောင်မှုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အချင်းမြင့်မားသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏သက်သေပြချက်နျူကလိယရှိသည်။ ကျနော်တို့ clients များမဆိုလိုအပ်ချက်များကိုင်တွယ်ရန်နိုင်စွမ်းကောင်းစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်တို့အလိပ်ရှိသည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါက, အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
နူးညံ့သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းသောစုပ်ယူသန့်ရှင်းရေး,လျော်ကြေးငွေ moisturizing,Whitening နှင့်ပျော့ပျောင်းသော
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:Hyaluronic အက်ဆစ်,ကော်လာဂျင်,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,ကလိုလင်း,သွားဖုံး ၃ ခု,အမိုင်နိုအက်ဆစ်မြှုပ်အေးဂျင့်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/facial-cleanser.html
အကောင်းဆုံး မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးရည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Falan ပိုး Oatmeal ပြုပြင်ဆပ်ပြာဆပ်ပြာ Falansi Oatmeal Repair Softening Soap သည်လွယ်ကူပါသည်-ရန်-ခန္ဓာကိုယ်ဆပ်ပြာကိုသုံးပါသေချာစွာရွေးချယ်ထားသောအပင်နှင့်သန့်စင်သောအပင်ဆပ်ပြာအခြေစိုက်စခန်း(oat,ရှားစောင်းလက်ပတ်,shea ထောပတ်)ထုတ်ယူပုံသေနည်း,ပွတ်နေစဉ်ထိရောက်စွာသန့်စင်,ပြုပြင်,နှင့်အစိုဓာတ်,မိသားစုတစ်ခုလုံး၏ကျန်းမာသောအသားအရေကိုကာကွယ်ပေးသည်.ကမ္ဘာမြေမှထုတ်ယူ’s တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများ,သုံးဆစိုထိုင်းသောနှင့်ဂရုစိုက်ပုံသေနည်း.oatအရေပြားကိုနူးညံ့စေပြီးအရေပြားကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်’သဘာဝအစိုဓာတ်အတားအဆီးရှားပါးမှုအရေပြား၌ဆုံးရှုံးခဲ့ရရေကိုဖြည့်စွက်,ကော်လာဂျင်၏ function ကို restore,နှင့်အသားအရေနူးညံ့သောစောင့်ရှောက်လော့,တောက်ပနှင့် elastic.Shea နို့ဓမ်းရေနံနှင့်မဟုတ်သော၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်အတူ-ပါဝင်ပစ္စည်းများ saponified,၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောအစိုဓာတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးအသားအရေကိုသဘာဝနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအနေအထားတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်. အသုံးပြုသည်:ရေချိုးခြင်း,လက်ဆေးခြင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:80g x ကို 2pcs/သတျတော မူလနေရာ:ထိုင်ဝမ် သက်တမ်း:ငါးနှစ်